▷ Laptop kacha mma nke anụ ọhịa iri na atọ nke 13. Kedu nke a ga-azụta?
Daalụ maka nkọwapụta nke Intel tinyere na Ultrabooks, Laptọọpụ dị sentimita 13 abụrụla ihe ewu ewu site na mwụli na oke.
N'ọtụtụ ụzọ, Laptọọpụ dị sentimita iri na atọ bụ nha zuru oke, na ha adịghị arọ ma ọ bụ ahụ erughị ala ka nnukwu laptọọpụ. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ nhọrọ na ahịa, ma Windows na Mac.
1 Laptọọpụ inch iri na atọ atụnyere
2 Laptọọpụ inch iri na atọ kacha amasị anyị
2.3 13-inch Apple MacBook Pro nwere ihe ngosi Retina
2.5 13-anụ ọhịa MacBook Ikuku
2.8 asus zen akwụkwọ
3 Otu esi ahọrọ laptọọpụ inch 13 gị
3.2 Ibu ibu
3.3 Ebe nchekwa RAM
3.4 Ihu mmetụ aka
4 14 inch ọ bụ 13 inch ọhụrụ?
5 Nleta nke laptọọpụ inch 13
6 Ụdị laptọọpụ inch 13 kacha mma
7 13-inch ma ọ bụ 15-inch laptọọpụ?
8 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ inch iri na atọ dị ọnụ ala
Laptọọpụ inch iri na atọ atụnyere
N'okpuru, ị nwere tebụl atụnyere ụfọdụ n'ime ya kacha mma 13 inch laptọọpụ ugbu a na ahịa. Anyị agbalịwo itinye ụdị maka ihe ụtọ niile iji gboo mkpa onye ọ bụla. Ị ga-ahụkwa 14-inch ụdị na-bụchaghị ibu na na ekele mbelata nke ihuenyo okpokolo agba, nnọọ kọmpat na ìhè akwụkwọ nha na-enweta.
N'ụzọ dị otú a, ị ga-ahụ ọnụ ala, ìhè, ike 13-inch laptọọpụ ma ọ bụ na-enweghị ike imeri uru maka ego. Kedu nke masịrị gị?
Microsoft Surface Pro X -…
Maka ozi ndị ọzọ, anyị na-akwado ka ị lelee akụkọ anyị na laptọọpụ kacha mma taa. Ma ihe ọ bụla ị na-eme, nọgide na-agụ paragraf ndị a ka ịmata ihe ha bụ. Laptọọpụ inch iri na atọ kacha amasị anyị nke ọnwa ndị na-adịbeghị anya, buru n'uche na ị nwere ike ịtụle nke ọ bụla Laptọọpụ kacha mma nke sentimita ndị a na oke ọnụ ahịa ya.
Laptọọpụ inch iri na atọ kacha amasị anyị
Acer's flagship 13,3-inch kọnvatịbụl Laptọọpụ anaghị ehulata kpamkpam n'ime uche gị. Ọ bụrụ na isi mmasị gị bụ ụdị na ịchọghị igwe dị ike, ị gaghị ahụ ihe ọ bụla dị mma karịa mwepụta ọhụrụ sitere na Acer.. Ọ bụ ezie na ejighị ngwaike kachasị ike (ọ dị n'etiti), ọ nwere ike ijikwa ọrụ gị niile n'enweghị nsogbu ma ọ bụ ọbụna nwaa igwu egwuregwu ole na ole.
Ọzọkwa ekele ya 256GB SSD ị nwere ike ịme ngwa ma ọ bụ gbanye kọmputa ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo.
Ọzọkwa, N'ihi mgbakwụnye ọla ọhụrụ ya na atụmatụ dị gịrịgịrị, Aspire SPIN na-arụ ọrụ nke ọma karịa mgbe ọ bụla n'ụdị ojiji ya., na ọbụna nwere ike ịghọ mbadamba nkume. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ otu n'ime kọmpụta Windows kacha dị gịrịgịrị, dị mfe na nkọ ruo taa. Ma ọ bụrụ na ị ka na-enwe obi abụọ ma ị ga-akwụ ụgwọ ya, anyị na-emesi gị obi ike na ọ bụrụ na ị bụ freak imewe ọ ga-efu efu.
Mgbanwe na nhazi laptọọpụ.
Laa azụ na 2017 anyị chere na Lenovo Yoga bụ kọmpụta 13,9-inch na-egbuke egbuke, dị gịrịgịrị ma dị ọkụ, mana n'afọ a, ika a na-etinye anụ niile na grill site na ịmalite ụdị ọhụrụ ya. Nke ọhụrụ Lenovo Yoga 920 Ọ bụ laptọọpụ 13.9-inch, mana ọ nwere ọnụnọ nke a obere laptọọpụ 11 sentimita asatọ.
Ọ dabara nke ọma maka anyị, Yoga 920 bụ ịma mma mana dịkwa ike nke ukwuu. Laptọọpụ a nwere ikike ime ma ịrụ ọrụ na egwuregwu na-atọ ụtọ na batrị ya na-adịru nke ọma ka ọ ghara ịhapụ gị n'ọhụụ. N'agbanyeghị ma ị kpebiri ịkwalite laptọọpụ gị na ụdị nwere ihuenyo mmetụ UHD ma ọ bụ na ịchọrọ ikpebi ụdị HD zuru ezu, Yoga 920 Ọ ga-enye gị ahụmịhe dị ukwuu maka afọ ndị na-abịa. Laptọọpụ i7 mbụ nke a dị ọnụ ala.
13-inch Apple MacBook Pro nwere ihe ngosi Retina
MacBook kacha nta na ngwa ngwa bụ ike nke okike.
Ọ bụ ezie na n'èzí MacBook Pro retina 13-inch ọhụrụ agbanwebeghị, n'ime ime ka enweela ọganihu dị ukwuu, ya mere a na-ewere ya dị ka otu n'ime kacha mma laptọọpụ ika. Pro Retina nwere ihe nrụpụta Apple M1 kachasị ọhụrụ na-esote, nke dị ike karịa afọ gara aga. Ihe nrụpụta octa-core ahụ bụkwa nnukwu mmụba na ndụ batrị nkezi ma e jiri ya tụnyere MacBook Pro retina.
Ụdị MacBook Pro ọhụrụ a nwere ogwe aka nwere atụmatụ dị ka nke a Apple Force Touch Trackpad nke na-eji ọkwa mmetụta dị iche iche kama bọtịnụ igwe maka ịpị. Na mgbakwunye, àgwà siri ike nke Apple, nnukwu ihuenyo, yana ezigbo arụmọrụ gburugburu na-eme ka MacBook Pro ọhụrụ ya na Retina gosipụta otu n'ime nzọ kacha mma ma a bịa n'ahịa laptọọpụ inch 13 dị ugbu a.
Ultrabook mara mma n'ezie na ọnụ ahịa dị oke ọnụ. Agbanyeghị na Acer Swift anaghị agbaji ala ọhụrụ na mpaghara Ultrabook, ọ bụ a ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ laptọọpụ zuru oke yana ọnụ ahịa dị oke ọnụ, n’ihi ya, o kwesịrị n’ezie ka e nye ya otuto nile ọ pụrụ inweta.
Acer Swift bụ laptọọpụ wuru nke ọma, igwe ígwè niile, dị gịrịgịrị, dị mfe ma maa mma nke ukwuu. Ịdị ọkụ a na-eme ka ịrụ ọrụ kwa ụbọchị dị ka ịgagharị na ịntanetị, ikiri vidiyo ma ọ bụ idezi onyonyo dị mfe ma dị mfe. Ọzọkwa, n'ịtụle na ihuenyo ya bụ 1080p, ndụ batrị ya dị mma.
N'ezie, ihe kacha pụta ìhè banyere Acer Swift 5 bụ na ọ na-efu ihe na-erughị 900 euro, ọnụ ahịa dị ukwuu maka laptọọpụ.. Na nke a ọzọ n'ihi na ị na-enweta a Premium metal Ultrabook nwere ọmarịcha Full HD ihuenyo, Intel Core i5 processor, 8GB nke RAM na 512GB SSD. Yabụ na ọ bụghị Ultrabook kachasị ọhụrụ n'ụwa, ọ bụ otu n'ime uru kacha mma maka ego na ọ gaghị emechu gị ihu.
13-anụ ọhịa MacBook Ikuku
MacBook Air emechaala tinye batrị anyị n'aka ụbọchị dum?. Ahịa akwụkwọ ndetu dị gịrịgịrị na-abawanye ụbara n'ihi ụdị ndị nrụpụta dị iche iche, agbanyeghị, Apple na-ejigide ohere ya maka MacBook Air.
Laptọọpụ dị inch 13 nwere teknụzụ Apple ọgbara ọhụrụ, RAM ngwa ngwa yana ọdụ ụgbọ mmiri njikọ ọhụrụ. ma e jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ, ihe niile na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ dị ukwuu. Na mgbakwunye, ahụigodo ahụ dị mma (na azụ azụ), Multi-Touch trackpad na-arụ ọrụ nke ukwuu, ọ dịkwa ngwa ngwa dịka ịchọrọ ka ọ dị.
Laptọọpụ Lenovo okomoko a bụ kpakpando enwere ike ibugharị.
Lenovo emelitere laptọọpụ ya dị elu yana ihe ngosi HD zuru oke dị nkọ. Ogwe 1920 x 1080 dị njikere maka ụbọchị enwere ike ịlele ọdịnaya hyper-HD na ntụkwasị obi na ịntanetị ikuku. Ka ọ dị ugbu a, ederede na-ele anya nke ọma, dị ka ihe oyiyi - si otú ahụ na-abawanye mmetụta dị nso n'ọdịnihu nke ngwaọrụ a.
Lenovo Yoga 7 - Kọmputa ...
Ịdị mma nke ihuenyo Lenovo Yoga 7 yana etiti Gorilla Glass ya na-apụ apụ. Dị nnọọ ka ahụigodo ya nimble ya na ọmarịcha ọkụ electroluminescent ya. Laptọọpụ Lenovo Yoga 7 (malite na $ 1000) ọ na-adị gị ka igwe arụrụ arụrụ ugbu a nke ị gaghị eche na ị ga-aga n'ihu iji ruo afọ 2024 ma ọ bụ gafere. Na nkenke, anyị hụrụ Lenovo Yoga n'anya maka nrụpụta ọgbara ọhụrụ ya, ọmarịcha ahụmịhe nka ọ na-enye, yana njiri mara ya.
Laptọọpụ ụdị Ultrabook nwere ngwaike emebere ka ọ na-aga ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado laptọọpụ slim ma dị ike dị ka Lenovo IdeaPad, mana mmefu ego gị nwere oke karịa, laptọọpụ inch 15,6 a nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma. Ọ bụ ezie na ikekwe AMD Radeon Graphics adịghị ike dị ka ihe ị ga-ahụ na laptọọpụ egwuregwu dị elu, Lenovo Ideapad 3 nwere ike ịgba ọsọ aha ugbu a na ntọala ma ọ bụ abụọ dị ala na mkpebi.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụrụ na ị ga-azụta laptọọpụ iji kpọọ, anyị na-akwado ka ị lelee ya ndu a kacha mma maka Ịgba Cha Cha que ị ga-ahụ nke ka mma na ọnụ ala.
Ọrụ egwuregwu ya na-abịa na ahụ slim na ìhè Ultrabook nke nwere nnukwu ihuenyo 1080p yana 256GB SSD.. Ndụ batrị abụghị ihe kacha mma ya, mana ngwungwu niile na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ igwu egwuregwu ndị na-adịchaghị mgbagwoju anya na laptọọpụ na-ebugharị nke ukwuu na-enweghị ihe ọ bụla dollar agwụla.
asus zen akwụkwọ
Ngosipụta ọkwa Retina, ihe nrụpụta Ryzen 7 ọhụrụ yana imewe mbelata. Anyị na-eche ihu n'ezie Ultrabook? Samsung bụ otu n'ime ndị na-emepụta kọmputa mbụ wụliri elu na bandwagon Ultrabook. Kemgbe ahụ ọ rụrụ nnukwu ọrụ na-arụ ọrụ nke onye ọrụ Intel na ụfọdụ agbado agba agba, dị ka Asus ZenBook, Laptọọpụ dị elu.
Ultrabook ọhụrụ nke Asus, ZenBookỌ nwere ike idowe ika ahụ n'elu ruo nwa oge, ọbụlagodi ma ọ bụrụhaala na nkà ya na akwụkwọ na-ejide. Laptọọpụ dị inch 14 a bụ akụkụ mara mma nke ukwuu. Dị gịrịgịrị ma jiri nlezianya mee ya, nwere akụkụ na-egbukepụ egbukepụ na-egbuke egbuke na-ekpuchi chassis aluminom niile.. Agbanyeghị, mpụga ọla ọcha ya na-agwụ ike na-enye anyị ụfọdụ nkọwa gbasara ebumnuche ya: nke a bụ akwụkwọ Ultrabook adịchaghị lekwasịrị anya ma onye ọchụnta ego na onye ọrụ na-ejikarị laptọọpụ arụ ọrụ na cafes.
Kpọọ ndewo akwụkwọ Chrome kacha adịte aka.
Ihe nhazi Intel Celeron kwadoro akwụkwọ Chrome a ma na-akwakọba ọtụtụ atụmatụ n'ime obere ahụ.. Ndị ọrụ ga-ahụ ihuenyo inch 13.3 n'anya yana mkpebi 1366 × 768, yana ibugharị ya.. Na kilo na ọkara nke ịdị arọ ya, Acer Chromebook ọ bụ laptọọpụ mara mma.
Chromebook a nwere obere okwu ole na ole, dị ka ọ naghị arụ ọrụ nke ọma na ọnọdụ multitasking ma ọ bụ obere ụdị agba dị na ya, naanị otu. Ma Ọnụ ego ya, ịdị mfe ya na arụmọrụ ya na-enyere gị aka imeri njedebe ndị ahụ..
Maka ihe na-erughị euro 300, Asus bụ Laptọọpụ mara mma ma dị ọnụ ala nke na-enweghị ọtụtụ ebe adịghị ike. Ọ nwere ọtụtụ RAM na ihuenyo 720p HD, nke bụ nnukwu nzọụkwụ sitere na ụdị ndị ọzọ na klaasị ya, dị ka Samsung Chromebook 2 na Acer C720.
Otú ọ dị, ndị nwere ike ịzụ ahịa kwesịrị ịma na
Asus Chromebooks na-eme ka Chromebooks bịaruo nso mpaghara ọnụ ala nke Windows 10 laptọọpụ. Ya mere, Ọ bụrụ na ị naghị azụ ngwaọrụ ahụ kpọmkwem maka google ecosystem, ị nwere ike na-akwụ nnukwu ụgwọ.
Nke ahụ kwuru, sị, ihuenyo mkpebi 720p bụ nnukwu gbakwunyere na ndị na-ekwu okwu Skullcandy dị mma. Gbakwunye ya niile na laptọọpụ nwere ike ịbụ usoro nkwanye ugwu dị egwu maka oge ọ bụla, ma ịchọrọ iji YouTube, Netflix ma ọ bụ ikpo okwu ọ bụla.
Asus chromebooks bụ ndị akwadoro na ọnụ ahịa dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ obere laptọọpụ ka anyị na-ekwu na ntụnyere.
Otu esi ahọrọ laptọọpụ inch 13 gị
Mgbe ị na-azụta laptọọpụ 13-inch ị kwesịrị ị mara na ị na-eche ihu obere ihuenyo, yabụ ọ bụrụ na ị ga-eji kọmputa na-arụ ọrụ n'ebe anụ ahụ na-adịgide adịgide, ikekwe ọ ka mma ka ị lelee anya 15 nke anụ ọhịa ahụ laptọọpụ Ma ọ bụ zụta ihe nleba anya mpụga ka ị dabere.
Na nke a doro anya, uru ndị laptọọpụ 13-inch na-enye dị ọtụtụ:
Mgbe anyị na-aga ịzụta kọmputa, otu n'ime nkọwa ndị anyị ga-ele anya bụ processor. Dabere n'ihe anyị ga-eme, anyị nwere ike ịhọrọ nke nwere ezi uche ma ọ bụ nke siri ike karị. Ndị kasị ewu ewu bụ nke Intel, na i3, i5 e i7 na isi. N'oge na-adịbeghị anya, ha ewepụtala i9, mana nke a adịlarị maka ndị ọrụ na-achọsi ike. Ma eleghị anya, ọ bụrụ na anyị họrọ maka kọmputa nwere i3 processor, anyị ga-arụ ọrụ na kọmputa nke ga-arụ ọrụ a bit ziri ezi, ọ bụghị iji okwu "pedal". Iji rụọ ọrụ nke ọma, ọ bara uru ịzụta kọmpụta nwere opekata mpe i5.
N'aka nke ọzọ, e nwekwara processors AMD. Na mbụ ha dị ọnụ ala, mana Ryzen ha dị n'otu ma ọ bụ dị elu karịa Intel. Agbanyeghị na Ryzen 3 dị ntakịrị elu na arụmọrụ karịa i3, ọ dịkwa mma ịzụta kọmpụta na-amalite na Ryzen 5 ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrụ ọrụ na ọnọdụ.
Ọ bụrụ na anyị họrọ maka kọmpụta nwere ihuenyo dịtụ ntakịrị, ọ bụ, n'otu akụkụ, n'ihi na anyị chọrọ kọmputa dị mfe karị. Mgbe ihe anyị chọrọ bụ kọmpụta anyị ga na-ebugharị ọtụtụ ugboro n'ụbọchị ma buru ya na anyị mgbe anyị na-eje ije, ịdị arọ dị mkpa: anyị ga-azụta kọmpụta kacha mfe, ọ bụrụhaala na ọ ruru nkọwa kacha nta nke ahụ. anyị kwesịrị ịrụ ọrụ anyị.
Kọmputa dị fechaa kacha mma n'ụwa niile bụ n'okpuru 1.5kg, ma e nwere laptọọpụ na ahịa ndị na-erughị 1kg, nke dị ntakịrị. Ya mere, anyị nwere ike ikwu nke a iji kwuo nke a obere ibu arọNke a kwesịrị ịdị ihe dị ka 1.5kg.
Mana enwere ihe dị mkpa iburu n'uche: enwere ndị ọrụ mere mkpesa na oke oke dị ala na-asụgharị n'ime enweghị ntụkwasị obi mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmpụta na ikpere. Laptọọpụ na-akpụ akpụ, nke na-adịghị mma ma ọ bụrụ na anyị ga-eji ọtụtụ awa dee ma tinye ya n'ọnọdụ ọ bụla abụọ ruo atọ. Ihe kachasị mfe abụghị mgbe niile kacha mma.
Ebe nchekwa RAM bụ ihe anyị kwesịrị iburu n'uche mgbe anyị gara ịzụrụ kọmputa. Sistemu eji arụ ọrụ na-akawanye mma, mana ha na-adịwanye arọ. N'ihi nke a, a na-achọkwu ebe nchekwa RAM iji mee ka anyị nwee ike ibugharị sistemụ arụmọrụ n'ụzọ dị mfe. Iji kwesị ntụkwasị obi karịa n'eziokwu, ihe ga-eme ka anyị nwee oke RAM bụ inwe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu usoro na-emeghe, ya mere, ebe a anyị nwere ike ikwu na nke "mma karịa na-adịghị efu."
Enwere ọtụtụ laptọọpụ ndị a na-ere na 4GB nke RAM, mana anyị na-ekwu maka akụrụngwa nwere obere akụrụngwa. Iji hụ na kọmputa anyị ga-arụ ọrụ nke ọma taa na n'ọdịnihu, ọ kacha mma ịzụta kọmputa na opekempe 8GB mgbe ọ bụla o kwere omume.
Ihu mmetụ aka
Un touchscreen laptọọpụ ga-enye anyị ohere mee ka ojiji nke mmezi nhọrọ, n'ime nke anyị ga-eji ngwa emebere maka ihuenyo mmetụ ma ọ bụ were stylus see. Ọtụtụ kọmputa ndị gụnyere ihuenyo mmetụ na-eji sistemụ arụmọrụ Windows na-enye anyị ohere iji akụrụngwa nwere interface ya maka mbadamba. Na mgbakwunye, ha gụnyere ngwanrọ ga-enyere anyị aka ise na ihuenyo, dị ka ihe nchọgharị Edge nke ụlọ ọrụ.
Ọnụ ahịa kọmputa ga-adabere n'ọtụtụ ihe, n'ime nke anyị nwere ihe ndị dị n'ime. Banyere laptọọpụ nwere ihuenyo 13 ″, anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ nwere a Ọnụahịa mmalite nke ihe karịrị € 200, mana enwerekwa ụfọdụ ụdị ụdị ndị a ma ama bụ ọnụ ahịa ugboro 11 dị elu, ya bụ, karịa € 2200. Ọ ga-adabere na anyị na ojiji anyị ga-eji laptọọpụ, yana akpa anyị, họrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ.
Ihe ngosi 13 na 14-inch na-agbasa ebe niile, na-enye ohere maka a ịtụnanya nkwekọrịta na 13 inch laptọọpụ ịzụta. Anyị nwere ụdị dị ọnụ ala, ndị ọzọ nwere ezigbo uru ọnụahịa mma ma anyị nwekwara njedebe dị elu maka ndị chọrọ uru kachasị elu na ohere kacha nta enwere ike.
Ihe anyị na-akwado, zụta ụdị laptọọpụ 13-inch nke ị zụrụ, bụ na ọ na-abịa na draịvụ ike SSD. Maka euro 600 enweelarị ụdị ụfọdụ na-etinye ya na ọdịiche dị na ọkwa arụmọrụ ị ga-enwe bụ obi ọjọọ.
14 inch ọ bụ 13 inch ọhụrụ?
Anyị nwere ike ịsị ee. Edere akwụkwọ ndetu iri na atọ ahụ ka ọ bụrụ obere ibu karịa 13 ma tinye ihuenyo buru ibu karịa 15.6-10 ”. N'oge ahụ, akụkụ na okpokolo agba dị nnọọ ukwuu, mana ha jisiri ike belata ihe karịrị otu centimita.
Ekele maka mbelata a, ndị nrụpụta nwere ike ịgụnye ihe ngosi nke 14 ″ n'otu nha na ịdị arọ nke gụnyere ihuenyo 13 inch na mbụ. Ihuenyo buru ibu bụ ihe na-arụ ọrụ nke ọma na mmepụta ihe, ihe na-adọrọ mmasị karịsịa ma ọ bụrụ na anyị agaghị ebu ibu ibu na ya. Ọ bụrụ na ị masịrị echiche nke inwekwu ihuenyo n'otu oghere, ị nwere ike lelee ndị a Laptop 14 inch.
Nleta nke laptọọpụ inch 13
Ọ bụ ihe mgbagwoju anya ikwu banyere usoro izugbe ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ọnụ ọgụgụ nke ụdị ndị dị na ahịa. Otu ihe doro anya na enweghị ike ibugharị: ihuenyo 13 ″ ga-atụ mgbe niile 33.02cm ogologo.
N'ikpeazụ, ihuenyo ga-abụ widescreen (16: 9), nke dị ihe dịka 16.5cm n'ogo na dị n'okpuru 30cm n'obosara. Ihe na-agbanwe bụ nha n'ozuzu nke laptọọpụ. Ma ọ bụ na ọ dabere na ika ahụ itinye ego na R&D iji nwee ike itinye ihe niile dị mkpa na kọmpụta nwere obere akụkụ ma ọ bụ n'obere ohere. Laptọọpụ sitere na ụdị dị mma nke jisiri ike mezie kọmpụta dị inch 13 na akụkụ ya ga-enwe nha mechiri emechi nke ihe dịka 35cm n'obosara. Ọkpụrụkpụ, ọzọ, ga-adabere na ụdị ahọpụtara.
Dị ka data, site na 14 ″ bụ 13 ″ ọhụrụ Maka ihe ndị anyị ga-akọwa n'isiokwu a, ihuenyo kọmputa 14 ″ nwere nha diagonal nke 35.56cm. Ngụkọta nha bụ ihe dịka 38cm, dabere n'akụkụ akụkụ nke akwụkwọ ndetu.
Ụdị laptọọpụ inch 13 kacha mma
Ọ siri ike ịme ọkwa nke ụdị laptọọpụ inch 13 kacha mma ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile nwere ụdị nke nha ihuenyo a. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị ga-eme gị nhazi ọkwa nke ụlọ ọrụ kacha mma:
HP: Ọ na-enye uru dị oke asọmpi maka ego nke siri ike imeri.
Apple: MacBooks dị oke ọnụ, mana ịdịmma ụlọ ha enweghị atụ, ihuenyo ha dị mma nke ukwuu yana ha na-enwekarị nnwere onwe. N'ime ọtụtụ afọ, ị ghọtara na ịzụrụ MacBook bụ ezigbo nhọrọ.
Lenovo: A na-erekwa laptọọpụ Lenovo ọzọ ma bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ etinyela batrị ahụ, na-enye laptọọpụ 13-inch na-adịghị mma nke nwere ezigbo nrụpụta ọrụ yana ngwaike siri ike maka ọnụahịa anyị na-akwụ.
Asus: Ahụrụ m Zenbooks n'anya maka ịdị mfe na imewe ha mana nke bụ eziokwu bụ na katalọgụ ha nke obere laptọọpụ dị obosara.
AcerỌ bụ ezie na afọ ole na ole gara aga, ha hapụrụ ọtụtụ ihe a chọrọ, ọ bụ ezie na laptọọpụ ọhụrụ nke emepụtara na ahịa nwere nkwekọrịta dị mma n'etiti àgwà na ọnụahịa. Ha bụkwa nhọrọ ọzọ ị ga-atụle.
XiaomiỤlọ ọrụ China dị obere na nke a na akụkụ teknụzụ ndị ọzọ, mana ha na-aga ngwa ngwa na ngwa ngwa. Usoro nke Laptọọpụ Mi gị gụnyere akụrụngwa dị elu nke ga-ahụ na anyị nwere ike iji ha maka ojiji nkeonwe yana nke ọkachamara. Ha kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-atụle ịzụrụ laptọọpụ ọhụrụ.
13-inch ma ọ bụ 15-inch laptọọpụ?
Mgbe ọ bụla anyị ga-ekpebi ihe, anyị ga-atụle nke jiri ihe anyị ga-eme ya. Kedu nke ka mma maka ojiji anyị: laptọọpụ 13 ″ ma ọ bụ a 15 nke anụ ọhịa ahụ laptọọpụ?:
13 sentimita- Kọmputa 13 ″ ka emebere ka ọ bụrụ nke a na-ejikwa ma na-eri obere ego ibufe. Ọ bụrụ na anyị na-ejikarị laptọọpụ anyị arụ ọrụ n'ụlọ ma pụọ ​​​​na ya, ọ bụrụ na anyị kwesịrị iburu ya mgbe niile ma na-ebugharị ya ọtụtụ ugboro, anyị nwere ike inwe mmasị na kọmputa 13 inch.
15 sentimita: 15 ″, ma ọ bụ 15.6 ″ ka ọ bụrụ nke ọma, bụ nha ọkọlọtọ na ihuenyo laptọọpụ. Na kọmpụta ndị a anyị nwere ike ịrụ ọrụ na-ekiri ihe ndị ọzọ ọdịnaya, nke dị mkpa mgbe niile na karịa ma ọ bụrụ na anyị kwesịrị kewaa ihuenyo iji rụọ ụfọdụ ọrụ. Ihe dị ala bụ na ha buru ibu ma dị arọ, yabụ na ha nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kacha mma ma ọ bụrụ na anyị ga-ebu ya mgbe niile.
Ihe ọzọ anyị kwesịrị iburu n’obi bụ nke ahụ Kọmputa ndị buru ibu na-agụnyekarị inters dị elu karịa, yabụ ọ bụrụ na ihe anyị nwere mmasị bụ ike, anyị ga-elelekwa nke a. Ma ọ bụ na a na-akwụ ụgwọ nha na na nkà na ụzụ nke kacha nta na-adịkarị ọnụ; Ọ bụrụ na anyị chọrọ kọmpụta 13 ″ dị ike dị ka nwanne ya nwoke nke okenye 15.6 ″, ọ ga-abụrịrị na anyị ga-emerịrị nnukwu ego.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ inch iri na atọ dị ọnụ ala
Amazon: Amazon bụ otu n'ime ụlọ ahịa ịntanetị kachasị mkpa n'ụwa niile, ọ bụghị ikwu ihe kacha mkpa. N'ime ya, anyị nwere ike ịhụ ihe ọ bụla nwere ike izipu site na mail ma ọ bụ ụgbọelu, n'ime nke anyị nwere laptọọpụ inch 13 nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị niile na ọnụahịa kacha mma. Ọ na-eji uru ya kwurịta ọnụ ahịa dị mma na ụdị ma na-enye nkwa na-enweghị atụ, nke mere na ọ bara uru iburu ya n'uche oge ọ bụla anyị gara ịzụrụ laptọọpụ 13 inch.
Ụlọikpe BekeeỌ bụ ezie na okwu ahụ bụ "Bekee" pụtara n'aha ya, anyị na-ekwu maka ụlọ ahịa dị na Spain. El Corte Inglés bụ onye ama ama maka ya yinye nke anụ ahụ na-echekwa nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na ụlọ nwere ọtụtụ akụkọ, mana anyị nwekwara ike ịzụrụ ihe n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla, a maara ha maka ịnye ihe ejiji na ngwá electronic, na n'ime ngwaahịa eletrọnịkị anyị ga-ahụ laptọọpụ 13-inch site na ụdị ndị a ma ama. Ha kwesịrị iburu n'uche ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta laptọọpụ ọ bụla nha, gụnyere nke 13-inch.
nrutuCarrefour bụ agbụ nkesa nke mba dị iche iche nwere dabere na France. Na mbụ, a makwaara ha dị ka Continente, nke bụ hypermarkets nke dị naanị na nnukwu obodo. Ugbu a, anyị nwere ike ịhụ ụlọ ahịa Carrefour n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo ọ bụla nwere opekata mpe ndị bi na ha nwekwara ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. N'ime katalọgụ ya, anyị ga-ahụ ihe niile, gụnyere nri, uwe na ụdị elektrọnik niile, n'ime nke anyị ga-enwe laptọọpụ inch 13. Na nke kacha mma, n'ezie anyị na-achọta ha na ọnụ ahịa dị mma.
Ihe PCNgwa PC bụ ụlọ ahịa na-eto eto nke anyị ga-ahụ na ya ihe ndị metụtara eletrọnịkị. Ọ na-arụ ọrụ na Spain na Portugal na, dị ka a ọkachamara azụmahịa na kọmputa, eletrọnịkị na n'ụlọ ngwa ngwa ngwaahịa, na ya ụlọ ahịa anyị nwere ike ịhụ ụdị ọ bụla nke laptọọpụ na ezi price, n'ime nke anyị ga-enwe ndị kasị ibu, ndị kasị nta na nke etiti 13. - anụ ọhịa. Ha nwekwara ụlọ ahịa ha n'ịntanetị, ihe, n'ezie, bụ ihe mere ha ji ewu ewu.
mediamarkt: Mediamarkt bụ a yinye nke ngalaba ụlọ ahịa dabere na Germany raara onwe ya nye ire ngwa ngwa ụlọ, kọmputa na ngwá electronic onye na-azụ ahịa bụ onye a ma ama maka ịbụ onye na-ewu ewu okwu bụ "N'ihi na abụghị m onye nzuzu", ihe na-ezo aka na ọnụ ahịa dị mma ha na-enye. N'ụlọ ahịa ha, anyị ga-ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isiokwu ọ bụla metụtara ngwá electronic, n'ime nke anyị ga-enwe ngwaọrụ smart na kọmputa. Na ngalaba kọmputa ya, anyị ga-ahụ ụdị kọmpụta niile, n'ime nke anyị ga-enwe inch iri na atọ nke ụdị na nkọwapụta.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Size » Laptop 13 inch
12 kwuru na "laptọọpụ inch 13"
Ọktoba 2017-06 na elekere 03:10 nke abalị
Ọ dị mma! Achọrọ m ịzụta laptọọpụ maka kọleji ma amaghị m nke. Ojiji ga-abụ isi akpaaka ụlọ ọrụ, igodo, ihe ngosi (ebe ike ma ọ bụ mmemme yiri ya), mbanye, mudle, gmail na obere ihe ndị ọzọ. Maka ihe a niile, achọrọ m imefu obere ihe n'ihi na abụ m nwa akwụkwọ ma jiri ntakịrị ihe m nwere ike ịrụ ọrụ na-enweta ego zuru oke maka mmefu m, akwụkwọ chromebook na-amasịkwa m nke ukwuu. Kedu ihe ị ga-akwado m? Enwere m mmefu ego nke ihe dịka € 300, Toshiba masịrị m mana enwere m ntakịrị ego. Kedu nke i chere ga-ezute? Ọ bụrụ na ọ nwere ike ịka mma.
Ọktoba 2017-06 na elekere 04:8 nke ụtụtụ
Echere m na ọ bụ ezigbo nhọrọ ịga maka Chromebook n'ọnọdụ gị Asier 🙂 Ị chere ma ọ bụrụ na ịchọrọ 13-inch mgbe ahụ? 300 euro nke mmefu ego bụ ihe ziri ezi ma echere m na ọ bụrụ na nke a na-eleba anya na ngalaba anyị na obere laptọọpụ ị ga-ahụ ihe ndị ga-adị gburugburu ọnụahịa a, ọbụlagodi na ihuenyo dị ihe dịka 11 sentimita. Echiche kacha mma
Ụtụtụ ọma, obi abụọ m bụ na ọ dị ọnụ ala ka m zụta Acer aspire v3 371-73 nn laptop, ọ nwere naanị diski diski 240 gb ssd. Nsogbu ụfọdụ ma ọ bụrụ na m tinye diski mpụga. Kedu ka laptọọpụ a si dị, enweghị m ike ịhụ ihe ọ bụla na ịntanetị gbasara ya
Ọktoba 2017-06 na elekere 14:11 nke ụtụtụ
Enweghị nsogbu na draịvụ ike mpụga. Ọ bụ eziokwu na 240 abụghị ntakịrị njọ, ịbụ SSD ọsọ nke ịnweta faịlụ dị ngwa ngwa. Ọ bụ laptọọpụ ka m na-akwado Oscar 😉
Ọktoba 2017-06 na elekere 27:3 nke abalị
Ndewo, ehihie ọma!!!
Enwere m mmasị ịzụta laptọọpụ inch 13, mana enwere m ọtụtụ obi abụọ.
Isi ihe kpatara ịzụrụ ya bụ portability (M na-eme akara ugo mmụta masta ma achọrọ m iwere ya ka m were ọnọdụ dị ka oge efu site na ọrụ, ịga ụlọ akwụkwọ, wdg ...), mana na ọ nwere ogologo ndụ nke ezigbo laptọọpụ.
Abụ m onye ọrụ na-eme ka laptọọpụ na-adịru m ọtụtụ afọ (ihe dị ka afọ 7 ma ọ bụ karịa) n'ihi na anaghị m achọsi ike (M na-arụ ọrụ na akwụkwọ okwu, pdf iji mụọ, gụọ ihe na vidiyo ndị metụtara ọrụ ahụ. Na ọkwa ntụrụndụ, M na-achọgharị ịntanetị, dezie foto raw na-ekiri ụfọdụ usoro na ihe nkiri dabere na ọnọdụ ahụ, obere ihe ọzọ).
N'ụzọ doro anya, laptọọpụ na-ezute ebumnobi 3 (ibugharị, arụmọrụ na nnwere onwe) na-egosi ọnụ ahịa na-achọsi ike.
N'eziokwu, macbook pro retina 13 na-adọta uche m. Ọ dịtụbeghị mgbe m nwere ihe ọ bụla nke m si Apple na m chọrọ inwe ihe si Apple mara OS na-enwe ahụmahụ, dịkarịa ala, nke ụfọdụ ngwaahịa. Enwere m obi abụọ maka ụzọ isi kpuchie ebule na ssd na ọ na-emetụta m n'ime ogologo oge mgbe itinye ego dị oke ọnụ. Ọ bụrụ na m họrọ maka pro retina, ọ ga-abụ nke bụ isi (8gb ram na 128gb ssd. Anaghị m eche banyere ohere n'ezie n'ihi na m na-eji mpụga draịva).
Achọghị m imehie ihe na ọ bụ ihe efu ma ọ bụrụ na ọ bara uru maka onye ọrụ dị ka m itinye ego a ...
Enwere m olileanya na ị ghọtara obi abụọ m na m ga-enwe ekele maka ndụmọdụ ụfọdụ gbasara isiokwu a !!!
Daalụ nke ukwuu, ekele!!!
Ọktoba 2017-06 na elekere 28:8 nke ụtụtụ
Kedu ka ị mere Luis? Daalụ nke ukwuu maka okwu gị. Ị na-ahụ, agbalịrị m ọtụtụ laptọọpụ maka webụ na maka afọ ojuju onwe onye, ​​ma chee ụdị ihe nlereanya m na-ede gị si hehe echere m na blọgụ a abụghị ebe ịmalite ọzọ n'ime mkparịta ụka "Apple VS ụwa" ndị a, Otú ọ dị m bụ. obi ụtọ na m Macbook pro retina 13 si 2015. M na-eji ya kwa ụbọchị maka ọtụtụ awa na-arụ ọrụ na m mgbe nwere ụdị nsogbu ọ bụla, gbakwunyere na e nwere ihe mmezi ihe, nke bụ "premium mmetụta" dị ka m na-akpọ ya. N'ụzọ bụ isi, ọ dị ka ịnwe laptọọpụ dị ka nke a, enwere m mmetụta na m na-arụ ọrụ karịa n'ihi na achọrọ m "iji nweta uru" nke ịzụrụ m, amaghị m ma ọ bara uru. Ọzọkwa, site na ihe ị na-ekwu banyere ikiri usoro, ihuenyo retina dị ịtụnanya. Akụkụ ọjọọ? na ụbọchị 2-3 mbụ na-eweta ntakịrị nkụda mmụọ n'ihi na ị ga-eji ụbọchị abụọ a na-achọ ka esi eme "mkpụkpọ ụzọ" iji depụta-paste na ndị ọzọ, ebe ọ bụ na a na-eme ya na cmd ọ bụghị na njikwa. Ihe ọzọ na-adịghị mma bụ na mgbe ị nwetachara Mac ma mara ya, ị gaghị achọ ihe ọ bụla ọzọ 😉 Tupu nke a, enweela m ụdị Acer, Asus, wdg. Ha anọwokwa m ọtụtụ afọ (ọ bụghị ka gị hehe), na ha dị sentimita iri na ise. Agara m ihe karịrị sentimita 15 na eziokwu bụ na ahụchaghị m ihe dị iche, ma ọ bụ ma eleghị anya ọ bụ na m maara ya ngwa ngwa. Azụtara m nke m n'ihi onyinye m na-ejikọta gị na ibe, nke dị ezigbo mma na oké osimiri bịara ngwa ngwa. Echere m na ị nwere ya nnọọ kpebiri, na ọ bụ ezie na ụfọdụ ọ nwere ike iyi ihe na-ezighị ezi, eziokwu bụ na ọ bara uru. Ma dị ka m na-ekwu, nke a abụghị ebe maka ụdị mkparịta ụka a eleghị anya, n'ihi na n'ezie mmadụ na-amali elu na-ekwu na ọ dịghị mkpa ịzụta Mac, ọ gābu kwa ezi omume. Ọ dịghị mkpa, ma ọ bụrụ na ị nwere ike na-achọ, M maa akwado ya.
Ọktoba 2017-06 na elekere 04:12 nke abalị
Ndewo ụtụtụ ọma!!
Echere m na m ga-aga maka MacBook pro retina 13 (nke bụ isi).
Otu obi abụọ ọzọ, ebe ọ bụ na m ga-ewere nke kachasị mkpa, n'ihi na onye ọrụ dị ka m bụ isi i5 ugbua karịa nke zuru oke ma ọ bụ na e nwere nnukwu ọdịiche na i5 na-esote? Okwu a bụ na ụlọ ahịa ndị na-abụghị apụl anaghị enye gị nhọrọ ịhọrọ (nsogbu bụ na ha na-enye ego na-adọrọ mmasị karịa na apụl n'onwe ya).
Ọktoba 2017-06 na elekere 11:12 nke abalị
Akwụsịla akwụkwọ Toshiba Chrome nke 1080 (104 ahụ).
Ọktoba 2017-06 na elekere 16:12 nke abalị
Daalụ Eduardo, otu ahụ ka ọ dị ugbu a, anyị na-emelite ụdị CB30 ma anyị na-ekwu maka ya. Daalụ maka ikwu okwu
Ọktoba 2017-06 na elekere 03:8 nke ụtụtụ
Ana m achọ laptọọpụ dị fechaa, nke dị sentimita iri na atọ nke m nwere ike iji ya gwuo nke ọma. Anaghị m agba égbè ma ọ bụ simulation, ịkwọ ụgbọala ma ọ bụ egwuregwu yiri ya. N'ụzọ bụ isi m na-egwu egwuregwu atụmatụ ọ bụ ezie na nke ahụ dị ntakịrị na-achọ na mgbako ha. Echiche bụ ịzụta laptọọpụ ị nwere ike iburu na njem. M na-eme njem dị ukwuu maka ọrụ na enweelarị m igwe, nke a na-ekpuchi n'ezie, ọkachamara. Ego mmefu m ga-adị gburugburu € 13, mana ọ bụrụ na m chọtara ihe dị ọnụ ala karịa ọnụ ahịa dị ọnụ ala ... nke ọma, ka mma.
Ọ ga-amasị m ka windo sistemụ dakọtara na egwuregwu m. Ana m eche maka diski i7, SSD na FHD. 8gb nke Ram ma ọ bụrụ na ọ nwere eserese raara onwe ya nye ọ ga-adị mma, mana amataghị m ma ọ bụrụ na agbakwunyere ọhụrụ enweela akụrụngwa zuru oke iji nwee ike iji ụdị egwuregwu a tụọ.
Daalụ n'ihu maka ịza 🙂
Ọktoba 2017-06 na elekere 03:3 nke abalị
Ndewo Xesco, ka anyị hụ ma m nwere ike inyere gị aka. Daalụ maka ọtụtụ nkọwa, ọ na-adị mfe inyere gị aka na ọnọdụ a. Ị ga-atụle na eziokwu nke ịgbakwunye, dịka ọmụmaatụ, SSD na-ebuli ọnụ ahịa ntakịrị na eziokwu na ọ bụ 13 sentimita asatọ bụ kpọmkwem ebe ọ bụ na ọtụtụ laptọọpụ ndị e mere ka ha gwuo na-abụkarị 15 sentimita (anyị nwere ebe a a) nyochaa akwụkwọ ndetu egwuregwu), ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị ntakịrị ka ị na-agwa m, echere m banyere Alienware 13 R2 mana ị ga-agbatị € 150 ọzọ. Onwe ya kwesịrị ime ya n'ihi na ebe a na Spain ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ € 1800, mana ọ bụrụ na ị na-ele anya a njikọ nkeji ikpeazụ nwere ahụigodo QWERTY fọdụ. Echere m na ọ bụ naanị ya na-emezu ihe niile ị na-ekwu 🙂 Ọ bụrụ na ị na-ahụ na ị bụghị n'oge ma ọ bụ na ị na-ahọrọ "àjà" ụfọdụ dị ọnụ ala atụmatụ, dị nnọọ gwa m na anyị ga-ele ya anya. Daalụ maka ịdebanye aha 😀
Ọktoba 2017-06 na elekere 04:1 nke ụtụtụ
Oysters Juan, daalụ maka nzaghachi gị ozugbo!
Ọ dị mma, ejiri m mkpịsị aka m na bọtịnụ PayPal jide ya .... eziokwu bụ na akụrụngwa ahụ dị egwu (ugbu a enwere onyinye na dell na ha na-agbanwe draịvụ ike gị n'efu maka ssd) .. .. ma agara m ileba anya n'ịdị arọ na oyi na-atụ m: 3,2kg !!! Enweghị m ike ị nweta ya. Ejila m laptọọpụ ọzọ eme njem, enweghị m ike iburu 7kg arọ naanị na ngwaike.
M ga-anọgide na-ele anya. Anọ m na-achọ ihe dị ihe dị ka kilogram 1,5 ọ bụrụgodị na m ga-achụ ihe. Ahụla m Lenovo Yoga… .ma enwere ihe na-adọghachi m azụ! Abụọ abụọ ma metụ aka… .. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na m ga-ahọrọ ihe ọzọ na ahịrị Asus (Enwere m laptọọpụ egwuregwu 17 ″ n'ụlọ Asus na ọ bụ bọmbụ ahụ…. Enwere m nnukwu obi ụtọ na ya).
Achọghịkwa m isiokwu nke eserese ahụ. M na-emekarị egwuregwu ndị dị ka EuropaUniversalis, Ageod, Matrix Games, Soccer Manager, ... .. egwuregwu ndị na-adịghị nnọọ achọ na ndịna-emeputa (ọ bụ ezie na ihe ee, eziokwu… .n'enweghị ịghọ a Witcher) ma na data njikwa. Bịa, Amaghị m ma ọ bụrụ na a na-esote ọgbọ integrated ga-atụ elu na-azọpụta m ego itinye ego na a processor (m fọrọ nke nta ka m kpebie na ọ ga-abụ ihe i7 ... ma ọ bụrụ na ị na-enye ndụmọdụ m ọzọ), na a ssd na ezi ebule (8gb). Agbanyeghị, ị gwara m!